ဒီလိုဖြစ်နေတယ်၊ ကောင်းလား | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Education » ဒီလိုဖြစ်နေတယ်၊ ကောင်းလား	13
Posted by panpan on Nov 4, 2011 in Education | 13 comments
ကလေးတွေ တတ်ကြပါတယ်၊ ဥာဏ်ကောင်းပါတယ်
ကျောင်းမှာ မြန်မာ့ကျောင်းသားသီချင်း သင်ရတယ်
အဲဒါကို ကျောင်းသားတွေ ပြန်ဖျက်ဆိုကြတယ်
ဒါကို ဘယ်လိုမြင်ကြလဲလို့ ကောင်းလား၊ ဒါမှမဟုတ်အပျက်လား
မြန်မာ့ကျောင်းသား နိုင်ငံတော်အတွင်း အထင်အလင်းရှိရမည်
အများရှုစရာ တရားမှုကာ သနားကရုဏာပိုပါသည်
(အများရှုစရာ တရားမှုကာ သနားကရုဏာပိုပါသည်၊ အဲဒီစာသား နည်းနည်းလွဲမလားမသိပါ၊ အပြောင်သီချင်းပဲ သေချာမှတ်မိနေတယ် )
မြန်မာကျောင်းသား ပညာရေး ကျန်းမာရေးသည်
မြန်မာ့ကျောင်းသား နိုင်ငံတော်အတွင်း စော်လိုက်ရှိုတ်ရမည်
အရက်သောက်ကာ ဖဲရိုက်ကာ မတရားမှုမှာပိုပါသည်
etone says: ကမ္ဘာမကြေသီချင်းကိုတောင် အပေါ်ဆုံးစာပိုဒ် တပိုဒ်ထပ်ထည့်တာ သိပ်ကျေနပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့် … ကျောင်းသား အားလုံး သံပြိုင်ဆိုရတော့ လိုက်ဆိုကြဖူးတယ် … ။
အခု ပန်ပန်ရေးပြတာက မြန်မာ့ကျောင်းသား ဆိုတဲ့ သီချင်းလေ … ကျောင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပွဲတော်တွေမှာ သုံးခဲ့တယ် …. အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကိုက … အမျိုးမျိုး …သီချင်းဖျက်ပြီး ဆိုလာကြတာ … ရယ်တော့ရယ်နေရတယ် ခေတ်အဆက်ဆက် … ဖျက်ဆိုတုန်းပဲ … ။ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုရဲ့ အစက (ဘာပွဲလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး :D ) ကျောင်းသားစုံညီပွဲထင်တာပဲ သုဝဏ္ဏမှာလုပ်တယ် … အဲ့တုန်းက သီချင်းတပုဒ်ကလည်း သူများတွေ ဖျက်ဆိုတာ အတော်ရယ်စရာကောင်းတယ် … ။ ဘာတဲ့ … ။ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ပေါက်ပေါက် ရှာရှာ လျှောက်ဆိုတာ … အရမ်းရယ်ရတယ် … မမှတ်မိတော့လို့ ရေးမပြတော့တာ :D
pan pan says: မှတ်မိသလောက် ပြန်တွေးပြီး ရေးတင်ပါဦးအစ်မ
ဖတ်ပြီးရယ်ရတာပေ့ါ၊ ဗဟုသုတလည်း ရမှာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5615
inz@ghi says: တို့တေဇလူငယ်
ဖန်ဆီဒိုင်းလေး ချလို့ကာရယ် ဖဲလည်း၇ိုက်တတ်တယ်
ကျောင်းဆြာမ လာရင် ခွနဲ့ဆော်ပါမယ်
Diamond Key says: ကိုဇာ၊ ဘာလိုကြီးလဲ။
နောင်တချိန်မှာဆိုရင် မိန်းမခိုးပြေးမယ်… (ပန်ပန်) ???
AKKO says: ထက်ထက်မိုးဦးကို အားကျလို့ ပန်ပန်လို့ အော်တာဖြစ်ရမယ် :D
pan pan says: ဘယ်နားက ပန်ပန့်ပန်ကပါလာရတာတုန်း
ပေါက်ဖော် says: ကောင်းတယ်..
windtalker says: အွန် ဒါမျိုးတွေ လည်း ရှိခဲ့တာလား
naywoonni says: အသစ်ကိုတည်ထွင်ကြချင်တာပါ…။ သူတို့လေးတွေနဲ့ သင့်အောင်ပေါင်းပြီး တည့်မတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်မှာပါပဲ…။ ဟန့်ထားတဲ့သူ ပိတ်ပင်တဲ့သူတွေနဲ့ချည့်တွေ့တွေ့နေလို့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဆန်းသစ်တည်ထွင်မှုကို မမြင်ကြရတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်…။
small cat says: “ပညာတိုးတက်စေမည်
မြန်မာကျောင်းသား ပညာရေး ကျန်းမာရေးသည်”
အိမ်က ဘေဘီကြောင်လေး ကျောင်းက ပြန်လာရင်နေ့တိုင်းဆိုညည်းတတ်တဲ့သီချင်းပါ။
မဂွတ် ထော် says: မြန်မာ့ကျောင်းသား နိုင်ငံတော်အတွင်း အထင်အလင်းရှိရမည်
မွန်မွန် says: မြန်မာ့ကျောင်းသား နိုင်ငံတော်တွင် ထင်လင်းရှိရမည်
အများရှုစရာ သနားဂရုဏာ တရားမှုမှာ ပိုပါသည်
မြန်မာကျောင်းက ပညာရေး ကျန်းမာရေးညီ…။ ။
snow white says: “မြန်မာ့ကျောင်းသား နိုင်ငံတော်အတွင်း စော်လိုက်ရှိုတ်ရမည်
မြန်မာကျောင်းသား ပညာရေး ကျန်းမာရေးသည်”သူတို့ဥာဏ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်နော် ကျောင်းသီချင်းတောင် ဖျက်ဆိုတက်တယ် တကယ်တော်တယ် စနိုးလည်းစနိုးတို့ရပ်ကွက်ထဲကကလေးတွေဆိုတာ ကြားဖူးနေတယ် အနာဂတ်အတွက် စာရေးစာရာကောင်းတွေ သီချင်းရေးဆရာ တွေ တိုးလာအုံးမယ် ရွဲ့ပြောတာနော် အနာဂတ်ပေတေလေးတွေများအုံးမယ်….